Ihe oru ngo Bursa Metro ka na-echere, debanyere aka na Konya Metro | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara16 BursaBursa Metro Prours ka nọ na-echere, bịanyere aka na Subya Subway
Bursa Metro Prours ka nọ na-echere, bịanyere aka na Subya Subway
04 / 11 / 2019 16 Bursa, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey
bursa metro project ka na-eche
Ị nwere ikike gị Kentis na locomotive nke Turkey aku na uba, ma ọ bụghị nyefere.
Ma ụzọ ụgbọ oloko gị ma ụgbọ ala gị nwere ike ịgba ọsọ ma ọ bụ ọrụ nchebe dị n'agbata etiti gị emechabeghị.
Ternyaahụ, otu enyi nke na-echegbu onwe ya banyere Bursa zigara ya ozi-e.
Onye isi obodo Konya Metropolitan İbrahim Halil Altay ji nganga kerịta akụkọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ.
Enyi anyị tiri nseta ihu nke nke ahụ ma tụbara anyị ya.
Mahadum Necmettin Erbakan dị na Konya New YHT Station Fetih Street Meram Municipality Light Rail System Line Construction Work, Electromechanical Systems Supping and Commissioning Work and Supp of of Railway Vehicles Contrirti bịanyere aka na mmeme n'etiti CMC Taşyapı Consortium.
Oge na-enye afọ ojuju maka Konya.
Onye isi ala Altay kwupụtaraara ụmụ amaala ibe ya oge a sitere na mgbasa ozi mmekọrịta dịka nke a;
Tik Anyị ahụwo oge dị mkpa maka obodo anyị. Mbinye aka nke Konya Metro, nke bụ nnukwu akụ na ụba steeti n'akụkọ ihe mere eme Konya, bịanyere aka na ya. Jisie na Konya. Ọ ga-amasị m ikele Onye isi ala anyị Recep Tayyip Erdoğan, Onye Minista Transportgbọ njem na ndị niile nyere aka na usoro a. ”
Ọ ga-abụ ụgha ma ọ bụrụ na anyị asị na anyị anaghị ekwo ekworo.
Anyị na-atụ anya ịkesa ya na ndị njikwa obodo gị.
Kwere m, ike agwụghị anyị ide na eserese. Anyị ga-aga n’ihu n’ebughị iwe gwụ ruo na metro wee bụrụ atụmanya anyị na aka anyị jide pensịl.
Bursa, Ministri ihe na akụrụngwa na-anabataghị ihe ndị anyị chọrọ ka ga na-arụ ọrụ ka Bursa.
Anyị na-enyefe ego maka ndị ọrụ ebere niile na-eleghara Bursa anya na nke a.
Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan 31 March ntuli aka nke ime obodo na February nke ọnwa gara aga na Bursa, Gökdere Square Bursa Metro, Terminal Tram Line na Mountain na nkwa maka okporo ụzọ na ụzọ ọnwa 9 gafere.
Enweghị ihe ọ bụla.
Onweghi mmepe di omimi n’ime oru ndi isi ala kwuru n’uche m.
Ọ gaghị enwe ike ịhụ ndị otu nke Directorate General of Infrastructure Investments na Bursa.
Mgbe Ankara hapụ ihe ndị a, a na-aghota na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị nnọchi anya anyị enweghị ike ọfụma.
Anyị na-eche mmegide nke ụlọ ọrụ Ankara nke na-anaghị ewe Bursa anya na ikike ya.
Iwu usoro ọchịchị, nke Onye isi ala Erdoğan na-eme mkpesa ugboro ugboro banyere ya, na-egosi onwe ya na iguzogide ihe Bursa chọrọ.
Anyị nwere ike ịsị na imebi nke a agaghị ekwe omume na mgbanwe usoro.
N'agbanyeghi usoro ochichi onye isi ala, ụlọ ọrụ Ankara siri ike, nke jụrụ oyi bụ ihe nwute bụ nnukwu ihe mgbochi nye atụmanya ziri ezi nke Bursa.
Anyị amaghị etu esi agbaji nke a.
Ọzọkwa, agbakwunyere uru ọ na-enye obodo a bụ eleghara anya.
Ankara, nke na-enye nkwado ụgbọ okporo ígwè na Konya, Sivas, Erzincan na obodo ndị ọzọ batara n’uche ozugbo o kwere omume, na-aga n’ihu n’ihu na Bursa.
Ee, Bursa nwere ahịrị Bursaray dị, mana Ankara enweghị penny zuru oke.
Emere ya na mmefu ego obodo.
A na-akwụ Kfw'dan Bursaray nke German maka Mịnịstrị na-akwụ ụgwọ zuru ezu.
Kedụ ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ndị ozi weghara Mụnyere Lightning Metro?
Mba a asachala?
Ileghara ọchịchọ, adịghị ike na ọrụ nke Bursa bụ ikpe na-ezighi ezi emerela n'obodo a.
Ọzọkwa, ọ bụla ntuli aka, a obodo nke òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Turkey nyere nkwado na nkezi ke edinam.
Ebe e si nweta ya: İhsan Aydın - omume
9. Eurasia Erasia 2021 dị na Konya…
Banyere aha maka Konya Metro!
Edenyere ya maka Ụlọ Ọrụ Na-agazi na 3.Airport
Uzbekistan Cooperation N'etiti Turkey BTK ụgbọ okporo ígwè ...
Mbanye maka Yedikuyular Ski Center
AKWỤKWỌ NDỊ ANYỊ BAỊBỤRỤ Akara maka Nkeji Nke atọ
Nbanye! OMSAN Logistics First n'onwe Railway…
Sistem ụgbọ okporo ígwè na mpaghara mba
Antalya 3. Nbanye maka Usoro System nke Ụgbọ okporo ígwè
Nkwekọrịta maka Sivas Demirağ Haziri Ahịa Ọrụ
Akara maka Amasya Ferhat Hill Cable Car Project
Maka 400 Otokar Bus na ebufe Bucharest People…
Njikọ ụgbọ okporo ígwè dị elu na Europe…
Abanye n'ime ụgbọ ala ụlọ
Ihe ndị a na-ahụ maka ụgbọ mmiri Bursa
ụzọ ụgbọ ala
Mpaghara ụzọ Konya
Ngwunye tram njedebe
Ihe mere Lightning Metro
Bursa High Speed ​​Train Project dị na Agenda nke Council nke Ozi
Ationgbọ njem 24 Hour na Sanliurfa